अविरल यात्रा: 2010
धर्तीलाई पर्खाएर आफू भागि जान्छ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:00 AM No comments: Links to this post
तिमी आउने बाटो हेर्दै दोबाटोमा कुरी रहेँ
छिया–छिया भाको मुटु यादले सधैँ पुरी रहेँ ।
जाने बेला भनेकीथ्यौ देउरालीमा तिमी बस्नू
झिसमिसेमा भागी आउछु त्यही मलाई पख्नू
रातदिन बाटो हेर्दै बाटो तिम्रो कुरी रहेँ
आउँदा-आउँदै गोरेटोमा बाटो कतै भुलियो कि ?
खेल्दा–खेल्दै कुरा मनमा मनै फेरियो कि ?
अनेक तर्क गर्दै मनमा बाटो तिम्रो कुरी रहेँ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 9:58 AM No comments: Links to this post
कस्तो काँडा बिज्यो मनमा झिकूँ भन्दा झनै गड्छ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 9:56 AM 1 comment:
सासै फेर्न गार्हो पारी किन दुख्छ छाति ???
नदेखिने घाउ कस्तो पोल्छ भतभती ।
कैले लाग्छ खाग बनाई मुटु जलाई दिउँ कि
हावासँगै उडाएर डाँडा कटाई दिउँ कि
न दिनमा हाँस्न सक्छु न त सुत्न राती
उडिरन्छ सधैँ किन ?? मन छैन थीरमा
हिड्दा-हिड्दै गोरेटोमा पुगेँ तारे भीरमा
राप बढ्दै मन भित्र किन दुख्छ छाती ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 9:55 AM No comments: Links to this post
वाँच्नुको अर्थ मर्नु,
अब के फरक भयो
पानी म/हामीहरुमा ?
पानी जस्तै बगिरहेको छ जीवन
कुलुलु कुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलु ,
हिडेर बग्छ जीवन
र ओरालो बगेर
बाँच्छ सधैँ पानी,
धावा बोलिरहेको छ
चढ्छ को ?
अब काला पत्थर ?
(जता ऐस उतै आराम
जता धन उतै मन),
सहरतिर खुब मौलाएको छ रे
पर परबाट ल्याएको नासो संस्कृति,
सुदुररर क्षितिज पर
लादेनले निशाना बनायो
हान्दा पनि छेक्न सकेन संसार थेग्छु भन्नेले
अनि नाकै मुनि बसेको
रावणले किन चोरी औला नघुमाओस्
म/हामी रामापिथेकसहरुको अघि ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:16 AM No comments: Links to this post
पीडाहरु उर्ली आउँछन् भाका फेरीफेरी
निभाउन मनको आगो पाइन कतै पानी
माया भन्नु सधैँभरि बल्झिरहने घाउ रै'छ
तर्दा–तर्दै नदी बीच डुबि जाने नाउ रै'छ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:13 AM No comments: Links to this post
लिन भनि पठाकोछु आउनू तिमी जूनसँगै
बाटोभरि बास्ना छर्दै मखमली फूलजस्तै ।
महिनौ भयो चिठी–पत्र,खबर नि नआएको
धेरै भयो खुशीयाली मेरो मनमा नछाएको
रातभरि जागै बस्छु तिमी आउने बाटो कुर्दै
कति दिन बसूँ अब आँखाबाट आँसु झार्दै ।
फर्कदैनौ परदेशबाट मलाई बिस्र्यौ कि त?
खबर ल्याउने जूनसँग कतै तस्र्यौ कि त ?
सबै भन्न थाले परदेशीको हुन्न केही भर
तिमीले पनि बिर्से पछि मेरो को नै छ र ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:11 AM No comments: Links to this post
खुसी छैन मन
हाँसो खुसी छैन मनमा पीडा मेरो साथी भयो
बाँच्ने आधार छैन केही बरु मर्नै जाति भयो ।
बिश्वास माथि घात हुँदा कसोगरी मन बुझाऊँ
टुक्र–टुक्रा भाको मुटु खै के गरी भन सिलाऊँ
थोत्रो लुगा सम्झि मलाई बेवारिस फाली दियो
हाँसो खुसी छैन मनमा पीडा मेरो साथी भयो ।
मन उड्छ टाढा–टाढा चुडिएको चङ्गाजस्तै
आँखाबाट खस्छ आँसु बग्छ सधैं गङ्गाजस्तै
जीवन मेरो घातै–घातको अलिखित कथा भयो
खाएका ती बाचाहरु दुखिरहने ब्यथा भयो ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:10 AM No comments: Links to this post
ढुङ्गालाई पगाल्न खोजेँ आँफै गली गएँ,
जिउँने रहर हुँदाहुँदै आज मरे सरी भएँ ।
अनयास आँखाबाट आँसु त्यसै झरी रहे
दुःख लुकाएर हरपल तिमीसँगै हाँस्न सकू
चोखो माया तिम्रै लागि सधैँ साँच्न सकूँ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 12:47 AM No comments: Links to this post
तराई रोयो किन ?(गीत)
हिमाल हाँस्दा मुस्काएर तराई रोयो किन ?
आफ्नो आफ्नै बीच पनि पराई भयौँ किन ?
सुन्दर सानो घर हाम्रो सधैँ मिली बस्थ्यौँ
रुँदा सँगै रुन्थ्यौँ हामी हाँस्दा सँगै हाँस्थ्यौँ
हिमालको भर पहाड हुन्थ्यो पहाडको तराई
दुःख कष्टै भए पनि बस्थ्यौ रमाई-रमाई ।
मयूर नाच्दा पहाडमा डाँफे खुसी हुन्थ्यो
न्याउली रोए मैना चरी सँगसँगै रुन्थ्यो
तर आज डाँफे रुँदा न्याउली हुन्छे खुसी
आमा रुँदा यहाँ अचेल कोही छैन दुःखी ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:26 AM No comments: Links to this post
मुटु दुख्दा छातीभित्र आँसु झर्यो आँखाबाट
छायाँ पर्यौ किन तिमी आज मेरो आँखाबाट ?
विर्सु भन्दा किन आउँछ सम्झनामा घरिघरि ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:25 AM No comments:
यात्रा गर्ने धेरै यहाँ तर एक्लै परिएछ
हाँसो,खुसी बस्ने मनमा आँसु भरिएछ ।
हाँस्ने,खेल्ने ईच्छाहरु सबै मरी गए
रहरहरु सबै मेरा त्यसै वइली गए
सम्झी ल्याउदा मन मेरो हुन्छ कस्तो–कस्तो
उराठिलो चैतमासे खडेरीको वनजस्तो ।
आगो बल्छ मनभित्र पोल्छ सधैँ छाती
छटपटिन्छु दिनभरि जागै बस्छु राती
कुरा खेल्छ नानाथरि हुन्छ कस्तो–कस्तो
दुई दिनको जीवन पनि भयो किन यस्तो ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:23 AM No comments: Links to this post
किन छुन सक्थेँ
आकाशको जून तिमी किन छुन सक्थेँ
ओइलिएको कोपिला म किन फुल्न सक्थेँ ।
जति हेर्यो हेरौँ लाग्ने आकाशको जून
आकाशगंगा भइदिऊ कि तिमीलाई छुन
तारे भीरमा फुलेकी छौ किन छुन सक्थेँ
विहान हेर्छु शीत बनि तिमी पातमा हुन्छौ
ताराहरु वीचमा पनि किन तिमी रुन्छौ ?
छायाँ बनि भागि हिड्छौ किन छुन सक्थेँ
घामपानीको दोसाधमा पर्‍यो ईन्द्रेनी
घामपानी जस्तै रैछ हाम्रो जिन्दगानी ।
कहिले उराठ खडेरी त कहिले पर्ने झरी
नरोकिने बग्छ सधैं पानी बगेसरी
बसमा राख्न नसकिने आफ्नै जीवन पनि
पुग्ने रहर सबको हुन्छ सगरमाथा शीरमा
पापी हावा आइदिन्छ पुर्याइदिन्छ तीरमा
सोचेजस्तो हुन्न रैछ आफ्नै जीवन पनि
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 1:00 AM No comments: Links to this post
सपनीमा देखेँ आज गाउँ मै भएको
कान्छी सँगै घाँस,दाउरा,मेला गएको ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:11 AM No comments: Links to this post
यस्तै बेला हिड्थ्यौँ हामी सधैँ रमाउँदै
माया गरी एकअर्काको हात समाउँदै ।
अमला र वयर खाँन्थ्यौ मीठो मानीमानी
कांचो छोडी पाकेको नै, खान्थ्यौ छानीछानी
माया हाम्रो देखी भाग्थ्यो हावा सर्माउदै
तिनै कुरा याद आउँदा लाग्छ कथा आज
कुन पापीले श्राप दियो बन्यो ब्यथा आज
छेउमा बस्ने कोही छैन मलाई सम्झाउँदै
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:19 AM No comments: Links to this post
आँसुसँगै खुसी सबै बगि गयो कि ?
निष्ठुरीले पीडा सबै छाडि गयो कि ?
फुलेको फूल देख्दा ईश्र्या मलाई लाग्छ
विरसिलो जीवनदेखि टाढा भागूँ लाग्छ
भमरा झैँ रस चुसी भागि गयो कि ?
छातीभित्र उर्लि आयो वेदनाको भेल
घाउमाथि नुन छर्ने कस्तो हो यो खेल
खुसी फुल्ने मनभित्र आँसु भरियो कि ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:17 AM No comments: Links to this post
गयौ तिमी पराईको घुम्टो ओढेर
रात जान्छ रोइ–रोइ भिज्दै सिरानी
किन गयौ पराई भई मलाई छोडेर ?
तर आज गयौ किन ? मलाई छोडेर
नगरे’नि माया मलाई,हाँस्दा बोल्दा हुन्छ
किन राख्नु पीडा मनमा,ब्यथा खोल्दा हुन्छ ।
दिनमा रोए पनि जून,रातमा हाँस्ने गर्छ
वादलसँग आकाशमा प्रीति गाँस्ने गर्छ
हाँसे,बोले पीडा पग्ली मन हल्का हुन्छ
फूल हेर वाधा पन्छाइ सधैँ फुलिदिन्छ
काडाँहरु बिचमा पनि सधैँ हाँसी दिन्छ
मन भए मेरो मनमा,तिमी डुल्दा हुन्छ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 12:44 AM No comments: Links to this post
सुत्छु सधैँ राखेर,तिम्रो फोटो सिरानी
भिडभाड भए नि,किन लाग्छ विरानी
तिम्रै याद्मा,तड्पी रोको छु ।
कति खुशी तिमी त,चोखो माया छुट्दा नि
हेरी बस्छौ हाँसेर,मेरो इज्जत् लुट्दा नि
के अर्थ भो,तिमी वाँचेर ?
छाडी गयौ खै किन,मैले माया लाए नि
घात गर्यौ तिमीले,जति कसम् खाए नि
भुलि गयौ,एक्लै पारेर ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 1:44 AM No comments: Links to this post
गेडी लेख्ने दोश्रो प्रयास
के भो कुन्नी ए नि लै,चढ्यो लाली ओठमा
दिल बस्यो ए नि लै,माया कालो कोटमा
बसी गयौ,मेरो मनमा ।
व्यथा फेरि बल्झेर,दिन काट्न गाह्रो भो
मया सधैँ सम्झेर,बाँच्नलाई साह्रो भो
रोगी भा’छु,तिम्रै मायाले ।
थपी म्याद यिनले,मोज गर्छन् संसद्मा
होली खेल्छन् यिनले,सहीदको रगत्मा
सहीदको,आँसु लाग्ला है ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:38 AM No comments: Links to this post
गेडी सम्बन्धि केहि सामान्य नियमहरु :-
गेडी" प्रतिपादक खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू(चुम लिम्बू) ज्यूले तयार पार्नु भएको गेडी सम्बन्धि केहि सामान्य नियमहरु :-
१.प्रथम र दोश्रो पदलाई कथन भनिन्छ
२.प्रथम पदलाई कथन 'क' भनिन्छ l(बिषय बस्तुको कथन हुन्छ l)
३. दोश्रो पदलाई कथन 'ख' भनिन्छ ll(बिषय बस्तुको कथन हुन्छ l)
४.तेश्रो पदलाई थेगो भनिन्छ l
५.अन्तिम(चौथो) पदलाई बिट भनिन्छ l
६.सुत्रगत संरचना :-
७.प्रथम र दोश्रो पदमा गजलको काफिया र रदीफ जस्तो लय र यमकको निमित्त अनुप्रास मिल्नु पर्दछ l
८.तेस्रो पदले भावको मूल मर्ममा बस्नु पर्दछ l
९.तेश्रो र अन्तिम पदको अनुप्रास मिल्नु पर्दछ l
अन्तिम पदले भावको सम्पूर्णतालाई बोकेर चोटिलो निस्कर्ष दिनु पर्दछ l
नलाए नि चौबन्दी, मनमा राख नेपाल । = कथन "क"
ढाका टोपी लाएर, चन्द्र सूर्य उचाल । =कथन "ख"
साथी हो, = "थेगो"
सबै भन्दा देश माथि हो । = "बिट"
चौबन्दिको आठ्तुना बिनायो छ छातीमा
मायासँग साटेको सञ्जिवनी पातीमा
साटेको हो चौँरी गोठैमा ।
सुख खोज्छु,मन्को मूलैमा
Sabhar:Manu Loharungko Facebook Profilebata.
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:37 AM No comments: Links to this post
हिरा मोति जे जोडे नि परदेशमा कमाई
के को बस्न सकिन्थ्यो र हाँसी खुशी रमाई
सम्झी ल्याउदा आँसु खस्छ भुइँमा बररर ।
विदेशमा बसेको छ साथीभाइले भन्लान्
झिलिमिली रमितामा रमाएको ठान्लान्
विरहमा रुँदा यहाँ कसले सोध्ने मलाई
सुन चाँदी जे जोडे नि परदेशमा कमाई
के को बस्न सकिन्थ्यो र हाँसी खुशी रमाई ।
नपाइँने पराई देशमा पसिनाको मोल
खाकै राम्रो आफ्नै देशमा गुन्द्रुकको झोल
बस्नु पर्ने रै’छ बरु आफ्नै देश बनाई
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 12:13 AM No comments: Links to this post
कैले देखि मनमा बस्यौ,मुटु बनेर ?
माया साँची राखेको तिम्रै,लागि भनेर
बसिरै’छु,दिन गनेर ।
बेची खाए देशको नाम,मै हु भन्नेले
दादागिरी गर्छन यहाँ,शेर ठान्नेले
जाग्नु पर्ने,बेला भाकोछ ।
बुद्ध पनि रुन्छन यहाँ,दुःखी बनेर
मान्छे मार्न बस्छन यहाँ,खाल्टो खनेर
सती गए,मान्छे धनमा ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 12:08 AM No comments: Links to this post
यस्तै रै’छ जिन्दगानी बगिजाने पानी
झुक्किएको रै’छु म त आँफै जानीजानी ।
राम्रो जति सबै कुरा यस्तै हुन्छ क्यारे
हाँसी–हाँसी रुवाएर छाडी जान्छ क्यारे
लट्ठै पार्ने फूलको रुप जूनको उस्तै बानी
झर्नै पर्ने भएदेखि किन वागमा फुल्नु ?
अस्ताई जानु थियो भने किन मनमा डुल्नु ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 2:42 AM No comments: Links to this post
पहाडजस्तै अग्लो भयो पीरैपीरको भारी
कटाइदेला कसले राजै दुःख डाँडापारी ।
दुःखियाको कर्मै खोटो रुँदै बाँच्नु पर्ने
ओइलिएको पात रहेछु पलपल मर्नु पर्ने
खडेरी नि खपेकै छु त्यस्तै मुसलधारे झरी
जहाँ जान्छु आफ्नो दुःख जान्छ आँफैसँग
आँफैसँग लुक्दै भाग्दै कहाँ जाऊँ म अन्तै
निराशाले थिच्दै जान्छ वाँच्दा मरी–मरी
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:39 AM No comments:
आटोपीठो मीठै हुन्थ्यो खान्थ्यौ हाँसी–हाँसी
परदेश लागेँ कमाउन खुशी बन्धक राखी ।
अलिकति रहर मेरो धेरै कमाउने
कमाएर फर्की आइ सँगै रमाउने
दुःख पनि सुख हुन्थ्यो सँगसँगै हुँदा
नरोऊ भन्ने कोही छैन परदेशमा रुँदा ।
ज्यान टाढा भए पनि उनकै याद मनमा
कस्तो राक्षस पस्यो मनमा मन गयो धनमा
सम्झी–सम्झी भक्कानिदै रुन्छु घरि–घरि
छायाँ बनि उनको तस्वीर घुम्छ वरिपरी ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 2:31 AM No comments: Links to this post
सानो छदा सधैँ आमा आशिष मलाई दिन्थिन्
मुहार मेरो हेरी–हेरी पीर ब्यथा भुल्थिन् ।
हुर्के बढे सन्तान सबै लाखापाखा लागे
आफैँ–आफैँ झगडा गरी लडाई गर्न थाले
भन्थिन आमा दाजुभाइ मिलि सधैँ बस्नू
घरपरिवार,गाउँ अनि देशको इज्जत राख्नू ।
सानो थियो घर हाम्रो सुखी परिवार
कुन बैरीको आँखा लाग्यो बिग्रयो घरबार
बारम्बार भन्थिन् आमा नाम कमायस् वावु
जहाँ गए’नि साथीभाइ असल छिमेक छान्नू ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 1:22 AM No comments: Links to this post
जून निदाएको बेला
लेखक-केदार श्रेष्ठ 'गगन'
चित्र- खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू
औँसी हुन्छ रात सधैँ जून निदा'को बेला
बाँसुरी त्यो रुन्छ सधैँ धुन निदा'को बेला ।
भाग्य कसो फिर्ने छैन फर्किन्छ रे खोला
आशैआशमा बाँच्नु पर्ने कस्तो भाग्य होला ?
उजाड हुन्छ वाग सधैँ फूल निदा'को बेला
औँसी हुन्छ रात सधैँ जून निदा'को बेला ।
मिलि काम गरे हुन्छ देशको उन्नति
उठौँ,जागौँ,जुटौँ अब गरौँ आफ्नो प्रगति
मृत हुन्छ शरीर सधैँ खुन निदा'को बेला
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:56 PM No comments: Links to this post
ताराभरि पाउँछु तिमीलाई उसैगरी जूनमा
गीत गाउँछु तिमी नै छौ त्यसैगरि धुनमा ।
अन्जान मै माया बस्यो कतिसाह्रो गाढा
मन भित्र गढ्या माया नहुने है टाढा
जहाँ जान्छु उहीँ पाउँछु साथ मै तिम्रो छायाँ
नछुटिने, नमेटिने कस्तो तिम्रो माया ।
आकाशमा लाखौ तारा तिमी एक हौ जून
बादल बनि आइदिऊ कि तिमीलाई छुन
उड्छ मन कल्पनामा सिमलको भुवाजस्तै
तिमी मै हराई जान्छु आगोको त्यो धुवाजस्तै ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 6:20 AM2comments: Links to this post
खुसी हुँदा हाँस्थ्यो जून पूर्णिमाको साँझ
दुई दिनको रै'छ प्रीति कथा भयो आज ।
रिसाएझैँ गर्थिन् उनी धेरै माया गरी
जिस्किएर पर सर्थिन् जान्छु छाडी भनि
लुकीलुकी एकान्तमा भेट्रथ्यौ सधैँ साँझ
शान्त हुन्थ्यो यो मन एकझुल्को हेर्न पाए
पुगिन्थ्यो कि स्वर्ग उसको काखमा मर्न पाए
अतितका पाना पल्टी रोएँ धेरै साँझ
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:56 AM 1 comment: Links to this post
(गीत)बरु मृत्यु सहुँला
तिमी टाढा हुँदा म कसरी बाँचुला
टाढा नजाऊ मार,बरु मृत्यु सहुँला ।
तिमीलाई मैले आफ्नै मुटु मानिसकेँ
जीवनसाथी तिमीलाई नै ठानिसकेँ
तिमी पराई हुँदा म कसरी बाँचुला
पराई नहोऊ मार,बरु मृत्यु सहुँला ।
तागत छैन ममा पराई भाको हेर्ने
ईच्छा मेरो एउटै तिम्रो सिउँदो भर्ने
दुःखसुख बाडी हामी सँगै बाँचुला
छाडी नजाऊ मार,बरु मृत्यु सहुँला ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 1:17 AM No comments: Links to this post
रुन मन लाग्यो
फेरि आज उनलाई सम्झी रुन मन लाग्यो
छायाँ बनी उनकै नजिक हुन मन लाग्यो ।
पीडा सबै पग्लिएर रातमा मेरो निन्द्रा छैन
परदेशमा मेरो हजुर खाको छ कि छैन ?
महिना बित्यो बर्ष बित्यो खवर पाको छैन
रिसाएर हो कि कुन्नी सपनीमा आको छैन ।
भोलि–भोलि भन्दा–भन्दै जीवन बित्ने हो कि
हुलाकी दाइ खवर लगिदेऊ पर्खि राछ भनि
तृष्णा बढ्यो मनमा कस्तो छुन मन लाग्यो
फेरि आज उसकै यादमा रुन मन लाग्यो ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 3:59 AM No comments: Links to this post
(गीत )तड्पाएर छाडी जाने
तड्पाएर छाडी जाने निष्ठुर तिम्रो वानी कस्तो
किनारसँग मस्किएर बगी जाने नदी जस्तो ।
किन आउछु भन्नु त्यसै पर्खाई नआउनेले
झुटो कसम खानु किन माया नलाउनेले
पातसँग जिस्किएर बही जाने हावाजस्तो ।
सिङ्गो जीवन हाम्रो एउटै आधा तिम्रो मेरो आधी
किन भन्नु नहुनेले तिमी मेरो जीवन साथी
लठ्याएर भागी हिड्ने सुवास त्यो फूलको जस्तो ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 9:54 AM No comments: Links to this post
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:02 PM No comments: Links to this post
किन आउँछ यादहरु दुःखी मन रुवाउन
सहारा कोही भेटिन रोको मन बुझाउन ।
निर्दयी भइ रोइ हिड्ने किन बनायौ
पाप के गरेको थिएँ र यो सजाय दियौ
लाग्न थाल्यो जीवनमा खुसीभन्दा आँसु बढी
मीलन नभइ मरन भनि लेख्या मेरो छ कि ।
हात समाइ देउता भाकि कति कसम खान्थ्यो
कति राम्रो जोडी हाम्रो धन्य ईश्वर भन्थ्यो
वाचा कसम खाएका ती एकादेशको कथा भयो
हाम्रो यात्रा सँगै भन्थ्यो तर एक्लै छाडी गयो ।
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:46 AM No comments: Links to this post
तिमी जून हौ मेरो घाम हौ
दुई मुटु तर एउटै ज्यान हौ ।
आँखामा के गाँजल लगायौ
होस मेरो चयन हरायौ
उड्यो तिमीसँगै मेरो मन
कस्तो रुप लिई आयौ भन
जति हेर्यो हेरिरहूँ झन ।
नलजाई मेरो छेउ आइदेऊ
नछुट्ने कसम खाइदेऊ
तिमीसँगै हुन्छ मेरो मन
मेरो कुरा बुझिदेऊ मायालु
सुम्पिदिएँ यो जिउज्यान धन
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 10:42 AM No comments: Links to this post
कस्तो भाग्य रहेछ,भयौँ डाँडावारि डाँडापारी
बिधाताले झेल गरे’नि,हाम्रो माया अजम्वरी ।
मन मेरो सँगै छ,शरीर टाढा भए पनि
निष्ठूरी चाहिँ नभन्दिनू,डाँडै काटि गएपनि
नसोचेको हुँदो रहेछ,भयौँ टाढा कसो गरी ?
आशको दीप बाली राख्नू,आउला म फर्किएर
पापी मन नडुलाउनू,बस्नु मलाई पर्खिएर
एकान्तमा एक्लै बसी,नरुनू है धर धरी
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 11:31 PM No comments: Links to this post
मलाई भुलि गुनको मात्र कुरा गर्छौ किन ?
वाँसुरीलाई बिर्सिएर धुनको कुरा गर्छौ किन ?
मन आज भागिहिड्छ आफैँलाई बिर्सिएर
छायाँ किन तर्किदिन्छ आफैँसँग तर्सिएर
माया भन्दा सुनको गुनगान गाउँछौ किन ?
वाँसुरीलाई बिर्सिएर धुनको कुरा गर्छौ किन?
सपनाहरु झरिगए ओइलाएको फूलसँगै
फुल्ने रहर मेरो पनि पूर्णिमाको जूनजस्तै
बास्ना छाडि फूलको मात्र बयान गर्छौ किन ?
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 5:15 AM No comments: Links to this post
जूनको वयान के गरुँ तिम्रो रुप हेरी
एकपल्ट मुस्काइ देऊ न दन्त लहर खोली ।
कसकी छोरी हौ भन आउछु हात माग्न
ज्यान गए छाड्दिन म थालेँ पछि लाग्न
फूलहरुले ईश्र्या गर्लान् तिम्रो रुप हेरी
वयान गर्ने शब्द छैन हिस्सी परेकी
माया गरी बोलाउदा किन नबोलेकी
लट्ठै परेँ म त हजुर तिम्रो रुप हेरी
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 4:29 AM No comments: Links to this post
सागर रहेछ मन पीडा अट्ने कतिकति
भन्न पनि नसकिने ब्यथा सबै सहेजति ।
बहकिए मन त्यसै नसकिने हाँस्नलाई
पीडा बढेँ मन भित्र गाह्रो हुने बाँच्नलाई
मन रोए आँखाबाट आँसु झर्ने कतिकति
फूल हाँस्दा आँसु झर्ने मन दुःखी हुँदा
जीवन जिउँन साह्रो हुने मन सधैँ रुँदा
दुःखी हुँदा मन कुरा खेल्ने कतिकति
Posted by केदार श्रेष्ठ'गगन' at 2:51 AM No comments: Links to this post